Kukundwa kwegurukota rezvekushanyirwa kwenyika, VaWalter Mzembi, musarudzo yemunyori mukuru weUnited Nations World Tourism Organisation (UNWTO), naVaZurab Polilakashvilli vekuGeorgia, kunoratidza kuti Zimbabwe ichine dambudziko rekuti izvichenese pamberi pevakawanda pasi rose.
Amai Mlotshwa vanoti kuti Zimbabwe ibudirire kuwana zvigaro zviri mumapazi emubatanidzwa wenyika, hurumende inofanirwa kutanga yagadzirisa kutyorwa kwekodzero dzevanhu munyika pamwe nekuchengetedzwa kwemutemo yenyika.
Amaia Mlotshwa vanoti izvi ndizvo zvinotariswa nenyika dzakawanda kana yasvika nguva yekusarudza munhu kuti atungamire mapazi emu United Nations.
Asi mudzidzi munyaya dzekushanyirwa kwenyika, VaAldrian Mangisi, vanoti kukundwa kwaVaMzembi kwavarwadza zvikuru.
VaMangisi vanotiwo kunyange VaMzembi vakundwa, vanga vashanda zvikuru sezvo vakundwa nemavhoti matatu chete.
Kunyange hazvo vanhu vaine muonero wakasiyana, dzimwe nyanzvi dzinoti kana dai VaMzembi vakakunda musarudzo iyi, hapana chinganzi chaiwana nyika kunze kwekungoti Zimbabwe inenge iine munhu wayo ari pachigaro chepamusoro, asi pasina pundutso yazvinopa kunyika.
Studio7 haina kukwanisa kunzwa kuna VaMzembi kuti vanotambira seyi kukundwa kwavo.
Sarudzo yemunyori wesangano iri yakaitirwa kuSpain uko VaMzembi vakundwa nemavhoti matatu chete.